Xildhibaan Saabir Weerarkii guriga C/raxmaan C/Shakuur waa fal Argagaxiso! - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xildhibaan Saabir Weerarkii guriga C/raxmaan C/Shakuur waa fal Argagaxiso!
December 19, 2017 Cali Yare869
Xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ka hadlay Dhankiisa Xariga Siyaasi C/raxmaan C/Shakuur Warsame waxuuna ugu Horayn ka tacsiyeeyay Dhimashada Ilaaladii Siyaasiga ee ku dhintay Howlgalkii lagu xiray Siyaasiga .Xildhibaan Saabir ayaa Weerarkii lagu qaaday Gurigga C/raxmaan ku tilmaamay fal Argagaxiso oo uu sheegay in Masuuliyadeeda uu qaadayo Madaxwayne Fatmaajo.
Hadalka Xildhibaan Saabir Nuur Shuure ayaa u dhignaa sida tan.”Waxaan ka tacsiyeynayaa shanti dhalinyaro ee lagu laayay xalay guriga Siyaasi Abdirahman Abdishakur waxaan leeyahay Samir iyo iimaan Allah ka siiyo eheladooda ayagana jannatul firdawsa Allah geeyo. Waxaad moodaa in diiradda la saarayo xiritaanka siyaasiga kaliyah ee aan dhimashada iyo dhiiga daatay laga mashquulayo, dhimashada dhalinta Soomaaliyeed ee ka tirsanaa Ciidanka Xoogga dalka Sooomaaliyeed waa in masuuliyadeeda meel la saaro mana dhici doonto inta la duugo in la iska ilaawo ee waa in sharciga la horkeeno cidii ka dambaysay.
Waxaan kaloo cambaaraynayaa falkaas argagaxisada ah ee lagu qaaday guriga siyaasi Abdirahman Abdishakur ee aan sharciga waafaqsanayn ee laga soo abaabulay Madaxtooyada xadgudubna ku ah Dastuurka federaalka iyo sharciyada dalka u yaala. Waxaa runtii cajiib ah ayada oo la heli karo in warqad loo qoro ee la yiraahdo imaaw dacwo ayaa laguu haystaa in weerar ciidan lagu qaado saqda dhexe habeenkii dhimasho intaas nafood ah sabatay, Abdirahman maalin kasta hotels magaalada ku yaala ayuu joogaa maa loogu tago maxaa keenay gacan ka hadal? Ma moodaa fudeedka Feb-08 inuu dalkaan dib u celinayo.
Maahan markii ugu horeysay ee lagu xadgudbay sharciga dalka u yaala oo xadgudubkiisu yahay qayaano qaran taasoo uu caadaystay Madaxwayne Fatmaajo”
Siyaaasi C/raxmaan C/Shakuur oo Xabsiga loo taaxaabay ayay Dowladda Somalia Sheegtay inuu ka mid yahay Siyaasiin iyo Xildhibaano lagu tuhmay inay Duminayaan Maamulka Dowladnimo ee hada jira ayna u adeegaya Dowladado Shisheeye waxaana xusid mudan in Xildhibaan Saabir uu kamid yahay raga la eedeeyay.
Wadooyin ka mid Muqdisho oo maalintii labaad xiran
Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay dalka Eriteriya
Ciidamada isgarabsanaya oo ka dhaqaaqay Camaara
December 12, 2019 December 12, 2019 Duceysane